दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ! बल्ल बाँच्ने आशा पलायो ! | समाचार
September 21, 2021 NepstokLeaveaComment on दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ! बल्ल बाँच्ने आशा पलायो !
यस्तै भक्तपुर नगरपालिकामा पनि आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्यामा कमी हुँदैगएको छ । ७५ क्षमताको आइसोलेसनमा अहिले १६ जना मात्र रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रत्न सुन्दर लसिवाले बताउनुभयो । आइसोलेसनमै बस्न आउने संक्रमितको संख्यामै कमी आएकाले अब आइसोलेसन केन्द्रहरु घटाउँदै लानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको लासिवाले बताउनुभयो ।
September 14, 2021 September 14, 2021 Nepstok
राष्ट्रपति माथि ‘प्राङ्क’ को नाममा यस्तो भद्दा मजाक गर्ने को हुन् ? (भिडियो हेर्नुस्)
September 11, 2021 September 11, 2021 Nepstok